China Eco-inoshamwaridzika Vana Wooden Toys Madiki Dollhouse Diy Mini Doll House fekitori nevagadziri |Huiyang
Eco-inoshamwaridzika Vana Vematanda Matoyi Madiki Dollhouse Diy Mini Doll House
Natural huni ruvara
50000 Piece/Zvimedu paMwedzi Eco-inoshamwaridzika Vana Matoyi emapuranga Madiki Dollhouse Diy Mini Chidhori
Standard packing: 1pc / white paper yakaputirwa, zvidimbu zvakawanda / master carton.Special packing iripo: polybag ine / isina musoro, bubble bag, shrink yakaputirwa, bhokisi remavara, bhokisi rebhokisi, blister box.Customized packaging inogamuchirwa.
Huwandu(Zvimedu) 1 - 1000 >1000
Est.Nguva(mazuva) 45 Kutaurirana
17 makore FSC yakasimbiswa mugadziri, makore gumi nemana Alibaba Golden Supplier
Paulownia wd, Pine wd, poplar wd, Beech huni, Plywood, MDF
1.Sarudzo mbishi zvinhu
2. Kutarisa maitiro ose
3.Kutarisa pc ne pc
Yakakwenenzverwa, Yakavezwa, laser engraving, Yakapendwa, yakadhayiwa ruvara, moto unopfuta
Anenge mazuva 3-5
Anenge mazuva 35-45
USD1000.00 per item uye USD5000.00 per shipment.
Yakajairwa kurongedza: chena bepa, EPE foam bepa, bubble bhegi, blister kurongedza, tsamba yekuraira bhokisi, yemukati bhokisi, ruvara rwekugadzira bhokisi, mashanu akaturikidzana emakatoni ane makora.Customized packaging inogamuchirwa.
Mubvunzo: Uri kambani yekugadzira kana yekutengesa.
A: Isu tiri FSC yakasimbiswa mugadziri anobatanidza indasitiri nekutengeserana, makore gumi nemana Alibaba Golden Supplier.Kunyanya kubatanidzwa mumhando dzose dzebhokisi remapuranga nemapuranga emapuranga.
Q: Ndinoziva sei kunaka kwako
A: Yepamusoro mhinduro yakadzama mapikicha uye masampuli anozokwanisa kuona hunhu hwedu.
Mubvunzo: Ndinogona kuwana sampuli kutanga?Uye sampuli inobhadharwa sei?
A: Mashoma mashoma emahara emahara uye anotumirwa nekutakura zvinhu kuunganidzwa kana prepaid.Sample yakachajwa inogona kudzoserwa kana odha yauya.
Mubvunzo: Unogona kugadzira dhizaini yemutengi?
A: Customized dhizaini uye saizi inogamuchirwa.Isu tinobvuma OEM.
Mubvunzo: Ndinobhadhara sei?
A: Isu tinobvuma paypal, western union, zvakananga kubhengi kuendesa kuaccount account yedu uye kuona LC.Kana zvese zviri pamusoro zvisipo, tinokupa paypal invoice uye unongobhadhara nekadhi rechikwereti.
Zvakapfuura: custom square shape natural isina kupera ruva press wood wholesale